Xog: Maxaad ka ogtahay Ballanqaadka loo sameeyay Xildhibaan Goodax Barre,? – Hornafrik Media Network
ilo xog ogaal ah ayaa xaqiijiyey in Madaxweyne Farmaajo uu ka balanqaaday Cabdullahi Goodax Barre in laga dhigayo Wasiir marka ugu horeysa ee la samaynayo Isku shaandheynta Golaha Wasiirada, inta ka horeysa Xilka Wasiirnimo waxaa loo balanqaaday inuu ka mid noqdo Xildhibaanada sida joogtada ah safarada ugu raacaya Madaxweynaha meel kasta ee uu aadayo, waxaa intaa dheer waxa la siiyey lacag kaash ah.
haddaba waxaan is weydiiyey Cabduulahi Goodax Barre oo ah Wasiirkii ugu musuqmaasuqa badnaa ee xil qabta iyadoo la xasuusto in xilligii uu ahaa Wasiirka Dawladdii Xasan sheekh Madaxweynaha ka ahaa shaqada looga eryey Masuqmaasuq baahsan oo uu sameeyey, kadibna markii la eryay cidna daah kama saarna siduu u hadli jiray, iyo Erayadiisii ka fogaa Masuuliyadda ee uu ku hadaaqi jiray.
Goodax intii uu ahaa Wasiirka Arrimaha Gudaha waxaa lagu xasuustaa in Xarunta Wasaaraddu ay noqotay goob lagu kala dulaalo Mucaawinooyinkii Dalka. Waana Wasiirkii ugu horeeyay ee uu Xukuumaddii uu ka tirsanaa loo adeegsaday inuu wax ka rido, isagoona si xishood La’aan ah ugu sheegay Warbaahinta inuu kula talinayo inuu is casilo Raiisul Wasaarihii isaga soo magacaabay, taasoo ka yaabisay dad badan. kadibna markii la riday Raiisul Wasaarahana waxaa looga baxay ballanqaadkii ahaa in Wasiir laga dhigayo. Waana midda keentay inuu Af labadii yeero.
haddaba sidee isku waafaqaysaa in Musuq lala dagaalamo iyo in Goodax Wasiir noqdo,?
jawaabtu waa kooban tahay Farmaajo Iyo Kheyre ma hayaan Dhabihii ay kula dagaalami lahaayeen Musuq Maasuqa, Waxaase cad in Istaraatiijiyadooda 1-aad ay tahay inay la dagaalamaan cid kasta oo ka hor timaada Aragtidooda, Iyadoo Goodax-na uu ka mid yahay Shaqsiyaadka loo isticmaalayo inuu ka hor yimaado Xildhibaanada dhaliilaya Dawladda ama kuwa doonaya inay wax saxaan sida laga arkay Fadhigii Baarlamaanka ee looga hadlayey Miisaaniyada oo uu Goodax Barre afka iska furtay si uu u muujiyo inuu Difaacayo farmaajo iyo Kheyre, iyaguna waa sidii ay Rabeene’.
Intuu sii jiri karaa Xiriirka Goodax iyo Madaxtooyo,?
Goodax wax walba waxaa ugu horeeya inuu Xil iyo Lacag helo, waxaana hubanti ah haddii aysan dhicin in loo magacaabo Wasiir inuu sidiisii billaabo doono Mucaarado aan Masuuliyid ku salaysnayn. Waxayna Dadka Siyaasadda ka faalooda sii saadaalinayaan in Xiriirkan uu sii jiro karo oo kaliya inta laga samaynayo isku shaandhaynta, goortaas oo marka uu iska waayo Liiska uu billaabo doono Goodax yootan iyo Aflagaado sidii lagu yaqaanay.
W.Q: Cabdi Maxamad Ismaaciil (Cabdi Cuud)